PC ကွန်ပျူတာများအတွက် WhatsApp ကို - WhatsApp ကို web ကို Login လုပ်နည်း
ပင်မစာမျက်နှာ » ဘ‌‌လော့ခ် » PC ကွန်ပျူတာများအတွက် WhatsApp ကို - WhatsApp ကို web ကို Login လုပ်နည်း
PC ကို APK ကိုများအတွက် WhatsApp ကို - WhatsApp ကို web ကို Login လုပ်နည်း
သင်လည်း Desktop ပေါ်မှာ Whatsapp browse နိုင်ပါတယ်ရှိရာလမ်းကိုရှာဖွေဖို့ကြိုးစားနေပါသလား? ကျွန်တော်တစ်ဦးလွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကမှနောက်ကျောကိုကြည့်ပါလျှင်ကောင်းပြီ, ဒီအရာ၏အိပ်မက်မျိုးဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော်ဤ Whatsapp လျှောက်လွှာများနှင့်အပေါငျးတို့သ Whatsapp ဖှံ့ဖွိုးတိုးအဖွဲ့ကကျေးဇူးတင်၏အဓိကအားသာချက်ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ သူတို့ကသစ်ကိုမိတ်ဆက်နှင့် browse ကို၎င်း, PC ပေါ်မှာ Whatsapp ကိုခံစားဖို့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဟုခေါ်သည် "web.whatsapp.com ။ " ဒါကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆက်သွယ်ရေးရည်ရွယ်ချက်အဘို့မိမိတို့ Whatsapp အသုံးပြုချင်နှင့်ရှောင်ရှားရန်လိုခငျြသူမြားအတှကျစုံလင်သောနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည် ဖုန်းကိုအလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်း။
ဤဆောင်းပါး၌, ကျနော်တို့ထုတ်ဖော်သွားကြသည် Whatsapp web ကို login ဖို့ဘယ်လိုအသုံးပြုအဖြစ်အခြားလမ်းညွှန်များ "web.whatsapp.com ။ " ဒီမှာ, ဝင်ရောက်ရန်ဖြစ်စဉ်ကိုတိုက်ရိုက်လာမယ့်မီကသုံးစွဲဖို့လိုအပ်လည်းမရှိအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည် Whatsapp က်ဘ်နှင့်အဘယ်ကြောင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
အဘယ်ကြောင့်အဆိုပါအသုံးပြုသူများ Desktop ပေါ်မှာ WhatsApp ကိုသုံးစွဲနည်းလိုအပ်
သင်တစ်ဦးမကြာခဏအခြေခံပေါ်မှာသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုရယူလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကကို PC ပေါ်တွင် WhatsApp ကိုမက်ဆေ့ခ်ျများဖြစ်ပါတယ်သုံးပြီးချုပ်အကြောင်းပြချက်များထဲမှနိုင်ပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သငျသညျအလုပျအရပျ၌မကြာခဏဖုန်းကို အသုံးပြု. ခွင့်ပြုမပြုစေခြင်းငှါအခါ။
အလားတူပင် Whatsapp တမန်လည်းအများကြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်း-related ဆက်သွယ်ရေးဘို့အများကြီးပိုမြန်ဤသည်နေ့ရက်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ သင်က desktop ပေါ်မှာမက်ဆေ့ခ်ျကို browse နဲ့အလွယ်တကူစာရွက်စာတမ်းများဖလှယ်, ဖိုင်တွေ, စသည်တို့ကိုလျင်မြန်စွာ link ကိုဖွင့်လှစ် whatsapp.web အပေါ်ဒီတော့လွယ်ကူသည်နိုင်ပါတယ်။
သငျသညျကို PC ပေါ်မှာရှိသမျှသောအရာတို့ကို browse ဖို့ option ကိုရှိပါကဖုန်းကိုဘက်ထရီဥတုနှင့်အသေးစားမျက်နှာပြင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုကဲ့သို့အခြားအကြောင်းပြချက်တစ်ခုပြဿနာကျန်ရှိနေသေးသောမပေးပါ။
သငျသညျတစျခုလုံးကိုတစ်ရက်များအတွက်လက်ပ်တော့သို့မဟုတ် desktop ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်ကြသောအခါသင်တို့ကိုအလွန်အကျွံဖုန်းအသုံးပြုမှုကိုရှောင်ရှားချင်နှင့်လိုက်တဲ့အခါ, ဒီ web browser ကို option ကိုစိတျ၏အပန်းဖြေဧရိယာရန်သင့်အားယူပါလိမ့်မယ်။ ယခုသင်အလုပ်မလုပ်ခြင်းနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာအရေးကြီးသောမက်ဆေ့ခ်ျကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။
အွန်လိုင်းကိုမက်ဆေ့ခ်ျ Check ရန် WhatsApp ကို Web ကိုအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းရှိပါသလား?
အဆိုပါအောင်မြင်စွာလျှောက်လွှာတီထွင်ပြီးတော့ WhatsApp ကိုကို web ၏ထို option ခြီးမှမျးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကောင်းသောအရာကမက်ဆေ့ခ်ျကိုဖတ်မှ extension ကိုတစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာတစ်ခုသို့မဟုတ် Third-party ပလက်ဖောင်းမဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ WhatsApp ကိုသူ့ဟာသူဖွံ့ဖြိုးကြောင့်သင်၏ desktop / laptop ဒါမှမဟုတ် browser ကိုပေါ်ရှိသင့်မက်ဆေ့ခ်ျစစ်ဆေးနေဘာဖြစ်လို့၏တရားဝင်အဖြေတွေဖြစ်လာတယ်။
Whatsapp ကို web သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုချိတ်ဆက်သောကြေးမုံနှင့်တူ၏။ ဒါဟာသင့်ဖုန်းမှအားလုံးသင့်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျလက်ခံရရှိနှင့်သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ပြသထားတယ်။
ဤတွင် Whatsapp web ကို login လုပ်နည်းင်
ပထမဦးစွာသင်, စတာတွေနဲ့ Opera, Mozilla Firefox ကို, ( အကယ်. သင်သည် Mac ကိုအသုံးပြုနေလျှင်) Chrome, Safari နဲ့တူသဟဇာတဖြစ်သည့်မဆို browser ကိုဖွင့်ဖို့လိုအပ် အခုတော့ရိုက်ထည့် https://web.whatsapp.com နှင့်သွားပါ။ သငျသညျအောကျဖျောပွကဲ့သို့မျက်နှာပြင်ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်
တစ်ခုမှာစာမျက်နှာလုံးဝ loaded လိမ့်မည် သငျသညျဟိုမှာတစ် QR ကုဒ်ကိုမြင်လိမ့်မည်။ အဆိုပါအနက်ရောင်စတုရန်းအရောင် QR ကုဒ်ကိုတစ်ဘားကုဒ်ကိုတူသောပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
အခုတော့ Whatsapp အပေါ်ကိုအသာပုတ်နှင့်သင့်ဖုန်းပေါ်မှာ app ကိုဖွင့်လှစ်။ Sidebar မှာ, သင်ရှာဖွေရေး option ကိုအထဲမှာသုံးဒေါင်လိုက်အစက်မြင်လိမ့်မည်။
အဆိုပါ sidebar မှာပြီးစာရင်းငါးခု options- နယူးအုပ်စု, သစ်ထုတ်လွှင့်, Whatsapp က်ဘ်နှင့်ချိန်ညှိမှုများရှိပြီးဖြစ်သောပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ထိပုတ်ပါ။
သငျသညျ Whatsapp က်ဘ်ပေါ် click လုပ်ပါလိမ့်မယ်ပြီးတာနဲ့သင့်မိုဘိုင်းရဲ့နောက်ဘက်ကင်မရာပွင့်လင်းကြလိမ့်မည်။
အခုတော့ရိုးရှင်းစွာအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖော်ပြခဲ့တဲ့ပုံရိပ်ကဲ့သို့သင့်မိုဘိုင်းမှတစ်ဆင့်သင်၏ desktop ကနေ QR ကုဒ်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေး။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုတွဲနေသည်နှင့်ယခု Whatsapp က်ဘ်ပေါ်တွင်မက်ဆေ့ခ်ျကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
ဒီနေရာတွင်သွားနှင့်ယခုသင်မက်ဆေ့ခ်ျမှ reply နိုင်ပါတယ်, ဗီဒီယိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှု, စံချိန်အသံများနှင့်လွယ်ကူစွာသူတို့ကိုပို့ပေးပါ။
မှတ်စု: သင်ဖို့အတွက် QR code ကို scan နိုင်မဟုတ်ခဲ့လျှင်သင်ကစနစ်တကျသို့မဟုတ်မအလုပ်လုပ်ခြင်းရှိမရှိ, သင့်စမတ်ဖုန်းပေါ်တွင်နောက်ဘက်ကင်မရာစစ်ဆေးလိုအပ်ပါတယ်။
သငျသညျအဆိုပါ Whatsapp Web ကိုအသုံးပြုပါရန်လိုအပ်ကဘာလဲ
မဆိုသံသယမရှိဘဲ, သငျသညျ activated နှင့်စစ်ဆေးအတည်ပြုရပါမည်သည့် Whatsapp အကောင့်, လိုအပ်ပါတယ်။ သင့်ဖုန်းနှင့်လက်တော့ / ကွန်ပျူတာကွန်ရက် / အင်တာနက်မှတစ်ဆင့်ချိတ်ဆက်ရပါမည်။ သင့်မိုဘိုင်းဗားရှင်း app ကိုသစ်အဆင့်မြှင့်ဗားရှင်းအညီမွမ်းမံသေချာအောင်လုပ်ပါ။
Whatsapp က်ဘ်တွင်အဆိုပါဖြည့်စွက် Settings များဘာတွေလဲ
သင်က desktop ပေါ်မှာအကြောင်းကြားစာများသတ်မှတ်ထားခြင်းနှင့်သင်တစ်ဦးမက်ဆေ့ခ်ျကို, မက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုအမြန် preview ကိုရတဲ့အခါသင်တစ်ဦးကပေါ့ပ်အပ် Example- အကြောင်းကြားစာဝတ်စုံ၏ထားတဲ့လမ်းရွေးနိုင်သည်။ အလားတူပင်, သင်အကြောင်းကြားစာသံကို disable / enable နိုင်ပါတယ်။
စကားဝိုင်းများအသံတိတ်; မည်သည့်ချက်တင်ပေါ်မှာ right-click အတူ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သငျသညျကို web client ကိုများအတွက်တူညီလုပျနိုငျနှင့်သင့်အလိုရှိသောအချိန်များအတွက်အသိပေးချက်များကို turn off ။ သင်တို့သည်လည်းချတ်၏နောက်ခံ wallpaper ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။
Whatsapp Web ကို Setup ကိုအတူအဖြစ်များသည့်ကိစ္စများဘာတွေလဲ
သငျသညျကွိုးစားဖို့အတွက် QR Code ကို scan နိုင်ခြင်းမရှိသေးလျှင်, သင့်ဘရောက်ဇာပေါ်တွင်ဝဘ်စာမျက်နှာကို refresh ။ တနည်းအားဖြင့်, သင်သည်သင်၏ဖုန်းတွင် WhatsApp ကိုပြန်ဖွင့်လို့ရပါတယ်။
မက်ဆေ့ခ်ျ၏အမှု၌မကယ်မနှုတ်, ဖုန်းနှင့်လက်တော့ / desktop ကိုနှစ်ဦးစလုံးအဘို့သင့်အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။ ဖုန်းရဲ့ဘက်ထရီကိုအနိမ့်သည်ဆိုပါက, သင် WhatsApp ကိုကို web ဆက်လက်သင်၏ဖုန်းအားသွင်းဖို့လိုပါတယ်။
ကောင်းပြီ, ကောင်းတစ်ဦးလမ်းညွှန်အမြဲမဆိုလျှောက်လွှာအသုံးပြုမှုများအတွက်သော် သာ. ကောင်း၏။ ဤတွင်ကျနော်တို့က Whatsapp ကို web သုံးစွဲဖို့အချို့သောအကြံပေးချက်များတို့နှင့်အတူကြွနှင့်လုံခြုံလိမ့်မည်။
သငျသညျဘရောက်ဇာပေါ်တွင်မက်ဆေ့ခ်ျကိုစစ်ဆေးနေအတူပြုတစ်ချိန်က Whatsapp ကို web ကနေ logout ။ ပိုပြီးလုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်များအတွက်သင့်မိုဘိုင်းကနေ setting ကိုသွားနှင့်ရှိသမျှသော device များအနေဖြင့်နေ log out ကိုရွေးပါ။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ Whatsapp အကောင့်လုံခြုံရေးပိုအလွှာစေမည်။
သငျသညျပွငျပရွေ့လျားသို့မဟုတ်အချို့သောအချိန်များအတွက်သင့် system ထွက်ခွာနေကြသည်ကိစ္စတွင်အတွက် Whatsapp ကို web ပွင့်လင်းပါစေဘယ်တော့မှမ။ မည်သူမဆိုလည်းသင့်စကားဝိုင်းများနှင့်တုန့်ပြန်ဖတ်နိုင်သည်။
Whatsapp တိုင်းစမတ်ဖုန်းအသုံးပြုသူများအတွက်အများဆုံးအကြိုက်ဆုံး app ကိုဖြစ်လာသည်။ ဒါဟာ add-on တစ်ခုနှင့်ဆက်သွယ်ရေးအလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ဖို့ပိုဖွယ်ရှိသည်။ အသံနှင့်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုကိုအင်္ဂါရပ်တွေကထူးချွန်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ထို့ကွောငျ့အပိုအသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေစေ, Whatsapp Web ကိုလူတိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးအစားထိုးဖြစ်ပါတယ်။ သုံးစွဲဖို့အလွန်လွယ်အကြံပေးချက်များနှင့်လှည့်ကွက်နဲ့အလုပ်လုပ်ဘယ်မှာသင်ဖုန်းကိုသုံးစွဲဖို့ကန့်သတ်ထားပါသည်နေစဉ်။ သင်ရုံအသုံးပြုရန်နှင့်ကအကောင်းဆုံးခံစားရန်လုံလုံခြုံခြုံနဲ့ခုတ်ဓားမဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
quick ကို Message
WhatsApp ကို web ကို Login လုပ်နည်း WhatsApp ကို web ကိုဝင်မည် PC ကွန်ပျူတာများအတွက် WhatsApp ကို WhatsApp ကိုက်ဘ် WhatsApp ကို Web ကိုဝင်မည်